Dowladda oo dooneysa in ay dardar geliso soosaarka koronto bey’adda u wanaagsan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qalab ileyska qorraxda koronto ka dhaliya oo ku dhegsan dusha guri ku yaal magaalada Uppsala. Sawirle: Martin Hult / SR Uppland
Dowladda oo dooneysa in ay dardar geliso soosaarka koronto bey’adda u wanaagsan
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 10.38
Si loo kordhiyo soosaarka korontada dabeecadda ama bey’adda u wanaagsan, waxay dowladdu dooneysaa in dadka rayidka ah iyo iskaashatooyinka loo oggolaado in ay canshuurta ka jaraan kharashka uga baxa soosaarka korontada doogga ah ama bey’adda u wanaagsan.
Waxay dowladdu soo jeedineysaa in kharashka canshuurta laga jarayaa uu ahaado ugu badnaan 18000 oo karoon, oo loogu talagalay cidda guriga dushiisa ku dhegsata qalab ileyska qorraxda u beddela koronto ama qalabka dabaysha ka dhaliya koronto.
Sababtaas ayeyna dowladdu u dooneysaa in ay dadka rayidka ah iyo shirkadahaba ku dhiirrigeliso in ay soo saaran koronto wax ku ool ah. Sidaasna waxaa tiri wasiiradda tamarta Anna-Karin Hatt oo hadalkeeda ku dartay:
- Iswiidhen waxaan uga baahannahay in la kordhiyo korontada dib loo isticmaali karo. Waana wax u wanaagsan habka tamarta Iswiidhen. Waxay kaloo u wanaagsan tahay dadka macaamiisha ah in ay iyagu kontarool ku hayaan kharashka uga baxa korontada.
Hindisahaan waxaa maanta loo gudbinayaa guddiga sharci-dejinta. Sharci ahaanna waxaa la filayaa in uu dhaqangalo 1da Luulyo ee sannadkaan.